အသိသတိ - စိတ်ကို စောင့်ကြည့်သိမှတ်တဲ့ သဘောကို သိကြည့်ခြင်း
မာတိကာ / စိတ်ကို စောင့်ကြည့်သိမှတ်တဲ့ သဘောကို သိကြည့်ခြင်း
စိတ်ကို စောင့်ကြည့်သိမှတ်တဲ့ သဘောကို သိကြည့်ခြင်း
(တချို့က အိမ်မှာစားတယ်။ တချို့က ဆိုင်မှာစားတယ်။
မစားခင် ပြင်ဆင်တာတွေ၊ ဆိုင်ကို သွားရတာတွေ၊ မသွားခင် အ၀တ်အစားလဲတာတွေ စသဖြင့် လှုပ်ရှားမှုပေါင်း များစွာဟာ တစ်ခုပြီးမှသာ တစ်ခုဖြစ်တာ။ စိတ်ကခိုင်းလို့သာ လုပ်နေတာပဲ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မဖြစ်ခင် (မလုပ်ခင်)၊
ဖြစ်ပြီးသွားတာ (လုပ်ပြီးသွားတာ)၊ ဒီသုံးခုပဲ ရှိတယ်။
အဲဒီအချိန်သုံးခု၊ အဖြစ်အပျက်သုံးခုဟာ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေတာကို သိဖို့လိုတာ။ စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်သိမှတ်နေရင် သိလို့ရတယ်။)
စားပွဲပေါ်က စားစရာကို မျက်လုံးကကြည့်တယ်။ စားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်တဲ့အရာကို လက်ကလှမ်းတယ်။
(တချို့က သတင်းစာ စသဖြင့် ဖတ်စရာ တစ်ခုခုဖတ်ပြီး စားတဲ့သူမျိုး ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် သတိထား ကြည့်ရင် စားခြင်းကိစ္စ အာရုံစိုက်ရင် စာဖတ်တဲ့အသိ ရပ်သွားတယ်။ စာကို အာရုံစိုက်မိရင် စားခြင်းကိစ္စကို သိနေတဲ့ စိတ်အလုပ်က ရပ်သွားတယ်။)
(စိတ်ဆိုတာ တစ်ကြိမ်မှာ တစ်ခုပဲ လုပ်တာ စိတ်သဘာဝ။)
အိပ်ယာနိုးတဲ့ကိစ္စ၊ အိမ်သာတက်တဲ့ကိစ္စ၊ မျက်နှာသစ်တဲ့ကိစ္စတွေ မရှိတော့ဘူး။
မရှိတော့ဘူးဆိုတာ ဖြစ်ခဲ့သမျှ အရာအားလုံးဟာ အချိန်နဲ့အတူ ကုန်ဆုံးသွားပြီဆိုတာ သိပေးရမှာ။
အသက်ရှင်နေသမျှ ဘယ်တော့မှ ပြန်မရတော့တဲ့ ကုန်ဆုံးမှု သဘာဝကို သဘောပေါက်လိုက်ရင် လက်ရှိ စားသောက်မယ့် ကိစ္စကိုလည်း စောင့်ကြည့်သိမှတ်ရင်း အဖြေထုတ်လို့ရတယ်။
စားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်တဲ့အစာကို ယူတဲ့နေရာမှာ လိုသလောက် ယူနေတာကို ဘယ်သူက စီစဉ်ပေးနေတာလဲ? (ယူနေတဲ့အချိန်မှာ မယူခင်က ဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ် မရှိတော့တာလည်း သိပေးပါ။)
လိုသလောက်ပဲယူပြီး ပါးစပ်ထဲ ထည့်တဲ့အခါမှာ ပါးစပ်ဟသွားတာ၊ သွားက ၀ါးပေးတာ၊ လျှာက အရသာခံတာ၊ အကြိမ်၂၀လောက် ၀ါးပြီး မျိုချချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာ၊ ပထမအဆင့် မျိုချတာ၊ လက်ကျန်ကို ဆက်ဝါးတာ၊ ၀ါးရင်းနဲ့ နောက်တစ်ခါ စားဖို့ လက်က လှမ်းတာတွေကို ဘယ်သူက ခိုင်းနေတာလဲ? (ဘာပဲလုပ်လုပ် သိနေမှသာ မလုပ်ခင်က စိတ်တွေ မရှိတော့တာကို သိလို့ရမှာ။)
(ဒီနေရာမှာလည်း ပါးစပ်ထဲ မရောက်ခင် အစာရဲ့ အနံ့ကြောင့် လျှာရည်တွေ ထွက်လာတဲ့ စိတ်အပြောင်းအရွှေ့၊ ထင်မှတ်ထားတဲ့ အရသာအတိုင်း ဟုတ်၊ မဟုတ်ဆိုတာကို ခွဲခြားပေးလိုက်တဲ့ စိတ်အပြောင်းအရွှေ့၊ သွားနာနေရင် မနာတဲ့ဘက်ကို ရွှေ့ပြီး ၀ါးပေးနေတာ၊ ဘယ်သွားနဲ့ ၀ါးမှ အဆင်ပြေမှာ။ သွားကြားညပ်တာကို ချက်ချင်း ဖြေရှင်းသင့်၊ မသင့်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်မိတာ။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကြည့်နေတာ သိသွားပြီး စိတ်ပြောင်းရွှေ့သွားတာတွေကတော့ တစ်ခုပြီး တစ်ခု အဆက်မပြတ် ဖြစ်ပေါ်နေမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘာအာရုံပဲပေါ်ပေါ် ပေါ်တဲ့အာရုံကို သိပေးဖို့ပဲ။)
မျက်စိ၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လျှာ၊ ကိုယ်၊ စိတ်ရဲ့ အာရုံခြောက်ပါး၊ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ခံစားစိတ်၊ မှတ်သားစိတ်၊ သိစိတ်၊ လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်း စိတ်တွေရဲ့ စုပေါင်းပြီး တစ်လှည့်စီ စိတ်အစွမ်းပြနေတာကို ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေက တစ်ခုပြီးတစ်ခု၊ တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့်၊ ပြောင်းရွှေ့ လှုပ်ရှားပေးနေရတာတွေဟာ အဆက်မပြတ် တရစပ် ဖြစ်နေတာကို စောင့်ကြည့် သိမှတ်ပေးရမှာ။
အပြင်က စားသမျှတွေ အထဲရောက်သွားတာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အစိတ်အပိုင်းတွေကလည်း သူ့အလုပ်သူလုပ်၊ သူ့တာဝန်သူယူ၊ အဆက်မပြတ် လှုပ်ရှားပေးရတော့တာပါပဲ။
ဗိုက်ပြည့်လို့ ခန္ဓာကိုယ်က အချက်ပြရင်၊
စိတ်က စားခြင်းကိစ္စကို ရပ်ဖို့ သတိပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ စားခြင်းကိစ္စ အဆုံးသတ်သွားတယ်။
ဒီသဘောတွေမှာ စိတ်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အဆက်မပြတ် ဆက်နွယ်နေတာကို စောင့်ကြည့်သိမှတ်နေမှသာ သိနိုင်မှာ။